Ndị uweojii na-eyi uwe ese foto na-atụ anya na Njirimara Ihu Ihu - OMG Solutions
Ndị uwe ojii Worn Cameras tụrụ anya na Njirimara Nghọta
Akụrụngwa na-ahụ maka ihu dị ka ngwaọrụ eji etinye otu ihu anya dị na nchekwa data nke profaịlụ ihu iji nweta egwuregwu yana ị nweta nkọwa ndị ọzọ gbasara onye na-enyo enyo. Mgbe ị na-eji kamera ahụ a na-ahụ anya na nyocha na-eme na vidiyo ahụ, ọ dị mkpa inwe ike ịhụ ihu ma nweta nkọwa ha iji matakwuo banyere ha ebe ha na-enyocha ndekọ mpụ ha na profaịlụ ha. Na US, nnukwu mba nke na - ere kamera ahụ na - eyi ọha egwu na - eme ka otu ụlọ ọrụ mebere maka mgbasawanye nke ọgụgụ isi mmadụ (AI). Nke a bụ nnukwu nzọụkwụ e butere na-eweta teknụzụ ihu ihu arụmụka na mkpesa ndị uwe ojii gburugburu ụwa. Companieslọ ọrụ dị ka Axon, ndị mepụtara ngwa Taser na ngwa ndị uwe na-eji eyi uwe ojii nke ndị uwe ojii ji eme ihe n'ụwa niile ekwupụtawo mmasị ha ịkwaga na ịgụnye ngwanrọ ihu ihu maka teknụzụ ha na-eyi. Teknụzụ ndị a ga-eme ka ndị isi na-ahụ maka inyocha na nyochaa ihu onye ọ bụla ha hụrụ ma nwee ike inyo enyo ka ha na-aga njem. Ọtụtụ ụlọ ọrụ teknụzụ ọhụrụ na-eto eto bụ ndị kachasị ama na teknụzụ onyunyo na-agba ugbu a n'ọsọ iji megharia ihu ihu na ọtụtụ ikike AI ndị ọzọ nwere na ntanetị vidiyo oge.
N'oge na-adịghị anya mgbe e hiwere kọmitii maka ihu ihu, otu ndị nwere ihe karịrị ikike ọrụ mmadụ nke 20, teknụzụ na òtù nzuzo zigara akwụkwọ ozi na-ekwu maka nchegbu dị oke mkpa na ugbu a ụlọ ọrụ Axion na ụlọ ọrụ ahụ guzobere ọhụrụ. Akwụkwọ ozi ahụ zitere, chọrọ ka amachie ngwa ngwa na usoro nyocha ihu ahụ na-arụ ọrụ. Ha kwuru na ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ibu ọrụ, n'ihi eziokwu ahụ sọftụwia ahụ nwere ọtụtụ ihe gbasara nzuzo, ezughị okè ọrụ yana ụfọdụ ihe egwu ga - emetụta ndụ. Achọpụtala ya ụdị nyocha emere n’oge na-adịbeghị anya na sọftụwia ihu dị n ’ezi adịchaghị mma mgbe ị na-enweta ndị nwere akpụkpọ ojii. Nke a emeghewo akụkụ dị ize ndụ nke ebe AI nwere ike ịkọwa onye nkịtị nkịtị na nke a nwere ike ibute nnukwu nsogbu. Onye hibere Axion zaghachiri ọha na ụlọ ọrụ ahụ anaghị ewuli usoro nnabata ihu ugbu a, mana ha na-agbasi mbọ ike na-atụle ya na ngwaahịa na nrụpụta n'ọdịnihu. Ọ nabatara eziokwu ahụ na sistemụ nwere ike ịbụ ezughị oke ma nwee ike iji ya mee ihe ma nwee echiche nke ya, agbanyeghị ọtụtụ uru ọ na-eweta enweghị ike ileghara anya kpamkpam n'ihi na ha bụ njirimara ndị nwere ike ịba uru n'ọdịnihu.
Onye isi Axion gara n'ihu kọwaa na ọ naghị enwe mmetụta usoro ihu dị mma bụ ihe ngwọta kachasị mma, mana na ụwa anyị bi na ya taa nwere nnukwu ọfụma na anyị enweghị ike ịhapụ ndị uwe ojii ndị uwe ojii ijide ndị omekome na-arụ ọrụ siri ike. Ohere inweta ihu ihu. Police na-atụ anya ka ndị uwe ojii cheta ihu ndị ha na-achọ na-adabaghị. O kwenyere na ọ gaghị arụpụta ihe ma bụrụ ihe nzuzu ịghara inwe teknụzụ ọhụrụ a. Ọ gara n'ihu na-ajụ ihe kpatara na ndị uwe ojii na 2020 kwesịrị iji ngwa sitere na 1990 mgbe ha na-arụ ọrụ ha, na-ekwu na ọ ga-apụta na ụwa ahọrọla ịghara ịga n'ihu ma ọ bụ itolite. Companylọ ọrụ ahụ gara nzukọ mbụ ya, na-akpọ ndị ụlọ ọrụ 8 họpụtara ndị ọkachamara na AI, nnwere onwe obodo na ikpe mpụ. Ndị isi bọọdụ ahụ bụcha ndị ọrụ afọ ofufo a kwụrụ ụgwọ ma enweghi ezigbo ike ịgbanwe ọtụtụ. A gwara ha ka ha nye ụlọ ọrụ ahụ ndụmọdụ maka ọdịnihu ikike usoro ihu dị n'ihu, ebe ha na-akọwapụtakwa etu ọ ga - esi nye aka iwulite arụmọrụ uwe ojii na arụmọrụ karịa. Ogologo ihu ka ichoro na ndi mmanye iwu na ndi nlere anya nke gọọmenti maka oke uru ya, na mbelata onu ahia nke igwe onyonyo nke ukwu na mmepe nke AI emeela ka aro a karie. Ndị mmepe n’ubi a na-atụkarị aro ya kemgbe oge na-arịọ ka e jiri ya rụọ ọrụ n’ebe sara mbara. Banyere 117 nde ndị America ihe ruru ngụkọta nke ọkara a ga - ahụta na nchekwa data, usoro ihu dị na njiri mara ya.
Iji ihu bụ ụzọ kachasị mfe iji mata mmadụ n'ebe dị anya, ọ nwere ike ịbụ na vidiyo ma ọ bụ ọbụlagodi ozugbo. Ọ dị mfe ibikwasị aka na njirimara ndị ọzọ nke biometrik na-emetụtakarị ị ga-agaru nso ma ọ bụ nwee kọntaktị anụ ahụ na ịnọ ha nso. Mana ndị nkatọ na-echekwa na njirimara ihu abụghị ihe a pụrụ ịdabere na ya dị ka data ihu nwere nwere ike ịka nká ma ọ bụ ọbụna gbanwee n'ihi ọnọdụ, ihe ọghọm na ọtụtụ nzụlite ahụ ndị ọzọ na-agbanwe ọdịdị mmadụ. Mana enwere nke ahụ chọrọ ịnabata ụwa niile ngwa ngwa o kwere omume na, ọ bụrụ na kọpị adọkpụrụkwa gị wee mata gị mgbe ahụ igwefoto ahụ ya nke nwere usoro ihu ga - eme. N'ụzọ dị otu a ọ ga - enwe ike ịkọkwu gbasara gị ma mee gị onye mgbaru ọsọ. Ọnọdụ ndị dị ka nke a nwere ike inye aka n'ezie mgbe nkwụsị na ịchọ onye omekome na-aga n'ihu.
Kedu ka usoro ihu ọhụrụ dị si arụ ọrụ?
Massimiliano Versace bụ onye a mụrụ na onye neuroscientist nke neurotali na onye guzobere ụlọ ọrụ mmalite ngwanrọ Neurala -an AI. Emeela ọ bụ ezie na patent-rue mgbe igwe na-amụ teknụzụ nwere ikike nhọta onyogho. N'ozuzu, mmata ihu na-arụ ọrụ site na mmụta igwe, nke na-azụzi kọmputa ka ọ chee echiche n'onwe ya site na ịnye ya data dị mgbagwoju anya iji gbakwunye na nchekwa data ya. Nwayọọ nwayọọ mana n'ikpeazụ, obere igwefoto dị n'ubu onye uwe ojii ahụ nwere ike ịchọpụta ụdị karịa agba ma mesịa zụọ ya iji mata ihu mmadụ, ma jikọta ha na nchekwa data nke ihu nwere profaịlụ (aha nwere ike ịbụ). Ọ bụ usoro na-arụ ọrụ site na iitatingomi ụbụrụ nke ụmụ anụmanụ, karịa etu kọmputa si arụ ọrụ nke ọma site na ịrịọ maka ntụzịaka ha. Formdị ọhụrụ a na-eme ihe n'onwe ya, gbanye igwefoto ma lee ka ọ na-amata ndị niile nọ gburugburu. Versace kọwara usoro ihe nrịba ama, dịka isi otu kpakpando nke ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ dị ka akụkụ ụbụrụ dị iche iche. Ọ kọwakwara na enwere ike kewaa mgbakọ ndị a n'etiti ngwaike na-arụ ọrụ ntinye dịka ụbụrụ na ngwaike nke na-arụ ọrụ dịka dendrites na axons na-eme. Nnyocha ya gosipụtara nke ukwuu na AI na-amụta ọtụtụ ihe na gburugburu ebe dị otú ahụ ma na-eji koodu ole na ole. Site na ibelata ego nke koodu achọrọ maka nhọta onyonyo, ị na-agba ọsọ karịa na nhazi na nke a pụtara na ọbụlagodi kọmpụta ndị na-esighi ike, nke na-enweghị ikike nhazi nwekwara ike ịrụ ọrụ ahụ. Mgbe ahụ ọ ruru ogo na kọmputa nke igwefoto anụ ahụ nwere ike ịmata ihe oyiyi ejirila igwe data zụọ igwefoto iji lelee. Ọ ga-enwerịrị ụfọdụ mmụta iji mechaa isiokwu ahụ.
Nke a na - emesịa bụrụ ihe enweghị njedebe nke mechara mepụta ngwa ọhụrụ maka ndị ọrụ nchekwa ọha. Ka anyị were ya na ikpe dabara adaba ma ọ bụrụ na iji dịka ọmụmaatụ nwatakịrị furu efu, ndị nne na nna kpebie ileta onye uwe ojii dị nso na-eche nche. Igwefoto ahụ na-eyi uwe ojii na-ahụ maka nwatakịrị ahụ ma dekọba ihe osise nke nwatakịrị ahụ na-efu efu, site n'ime nke a, injin AI amụtala ihe nwata ahụ dị. Ọ na-eji injin ahụ na-ezigara ndị cops niile ihe onyonyo a site na iji igwefoto ahụ nwere uwe ha ka ha jiri cam ha hụ gburugburu. Usoro nnabata ihu a taa na-enweghị ụdị dị iche iche na foto, nke a bụ n'ihi data ejiri zụọ ha. Ndị nyocha si ụlọ ọrụ mgbasa ozi Massachusetts Institute of Technology (MIT) kwuru na sistemụ ihu atọ dị na isi IBM, ihu ++ na Microsoft nwere ohere dị elu nke ịchọpụta ndị ọcha (99%) karịa ojii (70%).
Na mmechi na ha niile, igwefoto ahụ mmadụ nwetagoro ka ewu ewu na ịhụ ka ejiri ya wee mee nyocha ndị uwe ojii. N'oge ndị na-adịbeghị anya katọrọ maka ịnọgide na-enyere ndị mmadụ aka ma na-eme ka ọnọdụ na ọnọdụ ka njọ. Maka usoro eji eme ihe, ngalaba ndị uwe ojii na-ekpebi nke ahụ. Na Sacramento, ụfọdụ ndị uwe ojii gbagburu nwa okorobịa aha ya bụ Stephen Clark, nwoke isi ojii na-apụtabeghị ahụ gbara n'azụ nne ya. Okwu dị ka nke a emeela ka ndị nkatọ jụọ ajụjụ banyere etu ụkpụrụ ọrụ afọ ofufo na-arụ ọrụ afọ ofufo si arụ ọrụ, na-ezukọ ugboro abụọ n'afọ, nke ga-eme mkpebi siri ike nke ga-achịkwa ụlọ ọrụ ahụ. Ọtụtụ ndị nwere olile anya na njirimara ihu ga-adị ka Taser nke nweburu nnabata nke mbụ tupu ya emechaa nabata nnabata zuru ụwa ọnụ dịka ngwa agha kachasị eji eme ihe site na ndị omebe iwu. A ga-emezighị emezi ma ụlọ ọrụ na-eme njehie a ka a ga-ata ya ahụhụ ma ọ ga - aga n'ihu na nnukwu nzọụkwụ nke bụ usoro nkwado ihu dị ezigbo mkpa maka uto nke usoro nchekwa.
Nzuzo 6792 4 Echiche Taa